Pro-10 Studio sy headphone DJ （Mena） | OneOdio
Ireo zava-tsoa anio
Fanamarihana: Noho ny coronavirus (COVID-19), ny fanaterana dia mety hahemotra noho ny mahazatra any amin'ny firenena na faritra sasany.
Copyright © 2020 OneOdio
Ny vokatra 0 anaty sarety
Fandefasana & hetra novaina tamin'ny fisavana
Hanova ny Cart
Home / Pro-10 studio sy headphone DJ （Red）
Pro-10 studio sy headphone DJ （Red）
Mena / 709466429447
TOROHEVITRA TOERANA: Ankafizo ny feo malefaka sy fampiononana ambony miaraka amin'ny headphone fanaraha-mason'ny OneOdio Studio. Mpiasan'ny vondron'olona mpihaino lehibe sy 50 milimetatra miaraka amin'ny haingam-pandeha neodymium; bass mahery vaika, feo mazava ary feo avo be no mahaforona feo hi-fi tonga lafatra.
MITADIAVITRA HANOMPOANA: Ny halatra an-tsokosoko vita amin'ny kalitao avo lenta dia natao manokana ho an'ny fanaraha-maso an-doha an-doha ho an'ny fampiononana sy ny fitokanana feo mafy. Ny afon-doha mety namboarina sy mivezivezy mba ahafahanao mahita ny zoro tiana tianao hapetrakao.
TSY MISY AZONAO MBOLA: Matetika tonga any amin'ny fahitalavitra na stereo mankany amin'ny seza ankafizinao ny tadiny 9.8 kiraro vita amin'ny DJ vita amin'ny DJ vita. Ampidirina 6.35mm plug misy marika ary plug 3.5mm no tafiditra ao. Izy ireo dia azo voasintona tanteraka, azonao atao ny miditra ao amin'ny mixer izay te hampiasaina.
MISAOTRA MIDIKA: 90 ° milomano any an-tsofina amin'ny fanaraha-maso tokana amin'ny fotoana rehetra; ny afon-doha sy mahay mandanjalanja dia mitondra traikefa fihainoana tsy misy hatsiaka izay afaka maharitra mandritra ny ora maro, tonga lafatra amin'ny fahaizana sy ny fifangaroana.
Miara-miasa amin'ny: iPad, iPod, iPhone, Android ary fitaovana audio hafa maro hafa. Feo avo lenta avo, kalitao avo indrindra ary fampiononana farany. Ireo no headphone tadiavinao.
Tsy misy hevitra mbola
Soraty ny famerenana
Tsy misy hevitra mbola Soraty ny famerenana
Ampiasao ity sora-baventy ity mba hampahafantarana ny mpanjifa momba ny fiasa manokana amin'ny vokatrao, na ny fampiroboroboana isan-karazany toy ny fandefasana maimaimpoana.
FANONTANIANA & VALINY
Moa ve ny pro 10 vita amin'ny hoditra synthetic
Ny vita amin'ny hoditra PU.
+ 852-69403848 (Mon hatramin'ny Zoma 9:00 maraina - 6:30 hariva, UTC + 8 HKT)
Fomba fandoavam-bola manohana
American Express Apple Pay Google Pay Mastercard PayPal Miaraka amin'ny Pay Pay Visa
Copyright © 2020 OneOdioPowered by Shopify
Safidinao ny fanomezana
Studio Pro 10 Series
Safidio ny headphone tsara indrindra ho an'ny fitiavana tianao indrindra.